Shiinaha jumlada qalabka ciyaarta guddiga jumlada miniatures caagadaha tirooyinka ciyaarta warshad iyo soo saareyaasha | Kylin
Kaararka Iyo Punchboards
Gabdhaha alwaaxa iyo balaastigga ah
Ciyaaraha jumlada ah ee ciyaarta kuraasta cajaladaha tirade caagga ah
miniatures caag ah caadadii, waxaan aqbalnaa noocyada naqshadeynta, daabacaadda, iyo cabbirka.
Prototyping kaaga sawiradaada iyo muuqaalkaaga yar
Haddii aad kaliya rabto inaad sameysid 1-2 kumbiyuutarro yaryar, waxaan sameyn karnaa noocaaga adigoo soo dejinaya qaabkaaga 3D.
Wax soosaarka tirada badan, waxaan bixinaa cusbi (QTY yar) iyo wax isku duro oo la isku duro (QTY weyn) si kharashkaaga hoos ugu dhigo
Aqbal noocyo kala duwan, cabirro, qaabeynta astaamaha.
Ku soo dhowow inaad wax weyddiiso.
Haddii aad leedahay baahiyo habeyn ah oo aadan ka heli karin bartayada sida qaababka qaababyada kala duwan, midabada iyo cabbirka, qaybaha gaarka ah, qalabka, wax ka sameynta caagagga iwm. fadlan la xiriir iibkayaga khibradda leh iyo kooxda farsamada. Haddii aad jeclaan lahayd inaan kaa caawinno sameynta qaybtaada ciyaarta gebi ahaanba, waxaan kuu haynaa kaliya adeegga adiga.Fadlan hubi halkan.
Ku saabsan KYLIN
Waxaan nahay soo saaraha ciyaarta guddiga badanaa waxay soo saaraan ciyaaro loox ah, xujooyinka jigsaw, iyo ciyaaraha kaararka. Waxaan ku jirnay ganacsiga ciyaarta guddiga in ka badan 10 sano oo aan ka qaadno sharaf badan. Iyada oo ku saleysan alaabtayada tayada wanaagsan, aan lahayn MOQ iyo u-habeyn, waxaan ku guuleysaneynaa kalsoonida iyo taageerada macaamiisheena adduunka oo dhan.
Waqtigii lagu raray, waxaan ku imid sidii loogu talagalay, wax walbana waxay ahaayeen tayo wanaagsan, Daisy (gabadha iga caawisay arrintani) waxay ahayd mid aad u caawin badan oo sax ah faahfaahin kasta iyo sharraxaad kasta. Jawaabaha oo dhami waxay ku jireen waqti, had iyo jeerna waa la heli karayey isbeddel kasta oo ay ahayd inaan sameeyo. Gabi ahaanba waa la isku halleyn karaa. ”
Aad ayaan ugu qanacsanahay alaabada, tayo aad u fiican! Waxaan jeclaan lahaa inaan amaano wada hadalka iibiyuhu - wuu cusbooneysiiyey, aad buu u caawiyay, naxariis badan yahayna dulqaad. Geyn aad u dhaqso badan, 5 maalmood ilaa Croatia. Waxaan kugula talinayaa iibiyaha waana hubaal inaan markale wada shaqeyn doonno.
Hore: Gogosha khaaska ah ee guddiga ciyaarta jumlada dusha jumlada dusha sare ee ciyaarta
Xiga: Warshad laadhuur Wooden caadadii guddiga ciyaarta laadhuu laadhuu dadka waaweyn laadhuu woode laadhuu jumlo